Ingabe bakhathala yokubhalisa ngezinyathelo ezimbalwa ukudala i-akhawunti entsha kusayithi lobubhuki?
1xBet, paris izipesheli okuthembekile, ikhambi: ukubhalisa kwi-website ejensi silula, ngoba idinga hhayi ngokushesha:
ufaka ulwazi yokuhlala;
ukhombise inombolo yefoni efanayo futhi ikheli le-imeyili!
I izixhumanisi umdlali akhonjiswa uma bebona kunesidingo kule akhawunti siqu ngemva kokudalwa kwe-akhawunti.
Ngaphezu izinzuzo ezisobala, 1xBet ubhuki limelela anhlobonhlobo ezemidlalo paris ngokuhle amathuba kanye casino online Paris lezemidlalo virtual futhi uchungechunge ethandwa, slot machines nakumalotho nge amabhonasi ne-Australia.
Izindlela ukungena 1xBet
lokhu inkampani 4 Izinketho ubhalisa kwisayithi 1xBet:
1) 1ukuqopha xBet 1 ngokuchofoza
Indlela esheshayo kuyinto ukubhalisa ngokuchofoza okukodwa. Ngemva ekhombisa ezweni lakini futhi lwemali, ungagcina yonke idatha okufakiwe.
SPORTPARI ikhodi ukusetshenziswa Promo ukuze uthole ibhonasi 100% ku sakho sokuqala idiphozi up 50 000 CFA.
2) ifoni reverse
Ukuze uxhume 1xBet akhawunti, kumele ufake i-akhawunti yeselula, iphasiwedi bese ucindezela inkinobho "Xhuma". Uma ufisa, ungagcina idatha.
Ungakwazi ukufinyelela i-akhawunti yakho ye-imeyli. Kuphoqelekile ukuthi imeyili sihlotshaniswa akhawunti. Leli fomu lokubhalisa iyona esibanzi kakhulu. lapha, kumele uqedele:
ikhuphoni Code (EZEMIDLALO Pari)
Qaphela ukuthi kufanele ufake idatha elungile kuphela, kungenjalo inqubo ukuhlonza asikwazi ukwenziwa.
Ngemva ecacisa inani iselula, kumelwe chofoza inkinobho "Londoloza". SMS ukubheja ecacisiwe izibani inombolo. Umlayezo kufanele ifakwe iwindi elihambisana ifomu lokubhalisa ukuqinisekisa isixhumanisi.
Isinyathelo esilandelayo ukuze uqinisekise ukwamukela imigomo yesivumelwano nomsebenzisi bese uqedela inqubo yokubhalisa.
4) Ama-social network osheshayo
Ungaxhuma siqu 1xBet zokuxhumana wakho wokuxhumana nomphakathi uxhumano esheshayo. Akufanele ufake idatha: i-Google +, Mail.ru, yocingo, njll. Uma ixhunyiwe, kumelwe uchofoze isithonjana inethiwekhi exhumene. ukubhalisa, ucacise inethiwekhi oyifunayo, khodi yephromoshini SPORTPARI kanye lwemali.
Kumele kuqashelwe ukuthi isicelo kohlelo ukufaka izinamba noma izinhlamvu (umfanekiso 1xbet ikhodi) ukuqinisekisa ukuthi nabo bangabantu.
Thola indawo akekho ngoba usebenza 1xBet ubhuki abanamalayisensi Curacao nobheka abadlali emhlabeni wonke.
Ngakho-ke, umbuzo kanjani ukuchitha ukuhlonza 1xBet ubalekela ngokwalo, kodwa lokho akusho ukuthi inqubo enjalo ayibonakali kusayithi.
Ngemva kokubhaliswa, Kufanele ugcwalise zonke izikhala ku-akhawunti yakho siqu.
Ubhuki angase akucele ukuba uthumele izithombe yomazisi wakho ku imali. Akufanele esaba of it, ngoba kuyindlela ngokuphelele evamile kwezimali kwabo inqubo akhawunti.
Isevisi nokuvikeleka inelungelo sikucele ukuthi uthumele ikhasi ipasipoti isithombe kanye neminye imininingwane yomuntu.
Ungakhathazeki mayelana nobumfihlo idatha, konke ilawulwa esihlalweni Curacao. Isheke kuthatha cishe ngesonto, kodwa kukhona njalo Emacaleni angakajayeleki.
Qaphela ukuthi awukwazi imali ngokusebenzisa le indlela yokukhokha esetshenziswa lapho zokustokha.
Idiphozithi kanye ibhonasi 1xBet
Esikhathini 1xBet ubhuki, uxhumano senziwa nge inombolo kamazisi enikezwe uhlelo umdlali omusha ngemuva kokudala akhawunti. Ungasebenzisa ikheli le-imeyili bhalisiwe. Esikhathini sokuqala futhi esimweni sesibili, kufanele ufake i-password. Kungcono yini ukuthi ilondoloze iphasiwedi yakho futhi igama lomsebenzisi in izilungiselelo isiphequluli ukuze akekho ongasisebenzisa kanye nokufinyelela ku-akhawunti yakho.
Uma ungene ngemvume ngempumelelo ku isayithi nge-akhawunti entsha, kumelwe ulayishe akhawunti yakho umdlalo. Esikhathini idiphozi kuqala, isidlali ngokuzenzakalela uthola ibhonasi 100% proxy Inani. Ukuze ukubheja kufanele ukubheja atrial. Ukwenyuka le ukulandisa lemali okungenani izikhathi ezintathu, ungakwazi imali idiphozi.
ULwesihlanu, athuthukisa "Lucky ngoLwesihlanu" isebenza: i-akhawunti entsha umdlali 100 Euro reset. Futhi Reconstitution ngoLwesithathu kuzoletha enye ibhonasi futhi kabili!
ngaphezulu, abadlali Registered nethuba ukusebenzisa eziningi kwephromoshini futhi isigqebhezana amakhodi ukuze uthole imidlalo mahhala futhi Paris, kanye nekhono alulame ezinye izimali wachitha in the VIP Cashback Uhlelo.
Sithemba ukuthi lesi sihloko kuyoba usizo futhi siyaqonda ukuthi alobe 1xBet.